बधाई ओली र प्रचण्ड तर… « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 20 May, 2018 8:42 am
नयाँ पत्रिका दैनिकको आजको अंकमा उक्त पत्रिकाका अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक तथा सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाले नवगठित कम्युनिष्ट पार्टीबारे यस्तो टिप्पणी गरेका छन् :
दुवै पार्टीका अहिलेका शीर्ष नेताहरू नै ती पार्टीका पहिलो पुस्ता हुन् र तिनले नै यी भीमकाय पार्टीहरू निर्माण गरेका हुन् । झापाली समूह, मुक्ति मोर्चा र अन्य ससाना भँगाला समेटेर को–अर्डिनेसन केन्द्र र पछि माले बनाउँदा ओलीहरूसँग विरासतमा उल्लेखनीय केही थिएन । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उत्तरहरूबाट होइन, प्रश्नहरूबाट स्थापित भएको हो । के एकीकृत पार्टीले हिजो आफैँले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न सक्छ ?
प्रचण्ड त सधैँ आकस्मिक निर्णयका लागि परिचित छँदै थिए, यसपटक ओलीले पनि गज्जब सरप्राइज दिए । आआफ्ना पार्टीमा एकछत्र वर्चस्व कायम गरेका यी दुई नेताका निजी इच्छाविना न चुनावी तालमेल सम्भव थियो, न पार्टी एकीकरण  । गरौँ भने सरकारसँग धेरै अनुकूलता छन् । कम्युनिस्ट शासन नभएको कुनै पनि देशमा अहिलेसम्म नै प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा त्यति धेरै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी संसारमै कहिल्यै थिएन । कम्युनिस्टमात्र किन, अहिलेको विश्वमै निर्वाचनबाट यति धेरै लोकप्रिय मतको हकदाबी गर्ने निकै थोरै सरकार छन् ।
अमेरिकामै डोनाल्ड ट्रम्पकै पनि जम्मा ४४ प्रतिशत मत आएको हो । एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई अर्को अनुकूलता पनि छ । परिस्थितिवश यो एकीकरणप्रति दिल्ली र बेइजिङ दुवैको कुनै आपत्ति छैन, बरु समर्थन नै छ । पूर्वाधारमा तीव्र विकासका लागि यो विशिष्ट मौका हो । ओली र प्रचण्डले अब भाषण गरेर पुग्दैन, इतिहासलाई सम्बोधन गर्न र बदल्न सक्नुपर्छ । सत्ताले मान्छेलाई उपदेशक बनाइदिन्छ । नेताहरूले अब कांग्रेसलाई ‘ज्ञानवर्ध्दक गाली’ दिनभन्दा आफ्ना प्राथमिकता छिटो तय गर्नुपर्छ । देशलाई आवेग होइन आशा, आश्वासन होइन कार्यक्रम, सपना होइन नीति, भाषण होइन निर्णय चाहिएको छ ।
एकीकृत पार्टीको प्रभाव स्थिर र वास्तविक सामाजिक सुरक्षामा देखिनुपर्छ । जीवनजल नपाएर हजारौँको मृत्यु हुने देशमा जनस्वास्थ्यमा सुधार देखिनुपर्छ । आर्थिक विकास र आयमा परिवर्तन, आर्थिक र सामाजिक उपेक्षाबाट राहत पाउनुपर्छ । नयाँ पार्टीले कति मान्छेलाई साक्षर बनाउँछ ? कति भूमिहीनलाई जमिन दिन्छ ? कति कृषि उत्पादकत्व बढाउँछ ?
कति रोजगारी सिर्जना गर्छ ? संसाधन र अवसरहरूको विस्तार, आधारभूत यातायात सुविधा, राम्रा स्कुल, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा, पिउनयोग्य पानी र आयवृद्धिले मात्र एकीकृत पार्टीको औचित्य साबित हुनेछ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु छ र रोजगारी बढाउनु छ । तर, उद्यमलाई घृणा गर्ने र उद्यमीलाई माफिया ठान्ने वाम मानसिकता कति हट्छ ?
के एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता नीतिहरूको निर्धारण गर्न सक्छ जसले विकास र समृद्धिलाई सीमान्तवर्गका हितसँग जोडोस् । उत्पादक शक्तिले पनि गति पाओस्, समृद्धिका आवश्यकता र वितरणको न्यायबीच पनि सन्तुलन कायम होस् । रह्यो वादको दुःख । नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘सच्चा’ कम्युनिस्ट हुन जरुरी छैन र सम्भव पनि छैन । सिद्धान्तका नाममा जडता र अतीतमुखी शुद्धताको खोजीले पार्टीलाई कहीँ पु-याउने छैन । लोकतन्त्र अब ‘पोलिसी’ हुन सक्दैन, ‘प्रिन्सिपल’ नै बन्नुपर्छ । त्यसैले एकीकृत पार्टी केवल उदार वामपन्थी वा उदार समाजवादी भइदिए पुग्छ । समृद्धिसँग समानता र सामाजिक न्याय जोडिए पुग्छ ।
तर, केही संकेतहरू डरलाग्दा छन् । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उत्तरहरूबाट होइन, प्रश्नहरूबाट स्थापित भएको हो । गरिबी किन ? भेदभाव किन ? असमानता किन ? छुवाछुत किन ? राष्ट्रिय आत्महीनता किन ? अब यो आन्दोलन आफैँ आफ्ना प्रश्नहरूको उत्तर दिने ठाउँमा छ । र, उत्तर खोज्न प्रश्न सोध्नजस्तो सजिलो छैन । ६ वटा प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा वामपन्थी सरकार छन्, तर छुवाछुत उस्तै छ । बोक्सी भनेर अबोध किशोरीलाई यातना दिनेहरूलाई छुटाउन जाने मेयर गर्वसाथ आफूलाई वामपन्थी भन्छन् र तिनलाई पार्टीले निलम्बनसम्म गर्दैन ।
औचित्य स्थापित गर्ने हो भने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले आफैँबाट भत्काउन सुरु गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको माफियाकरणमा को हाबी छ ? एकीकृत पार्टीकै होनाहार समर्थकहरू । सरकारी विद्यालयहरूको निरन्तर गिर्दो स्तरले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थिचेको छ, तर शिक्षकहरू कसको झोला बोक्छन् ? कर्मचारीतन्त्रमा को हाबी छ ? एकीकृत पार्टीकै लेबी होल्डरहरू । विभाजनकारी गैससहरूमा कसको पकड छ ? एकीकृत पार्टीकै जोदाहाहरूको । के ओली र प्रचण्ड यो जालो भत्काउन तत्पर छन् ?
शीर्ष नेताहरूले ‘गोप्य बैठक’का लागि पार्टी कार्यकर्ता होइन, विवादास्पद बिचौलियाहरूका महल छान्ने गरेको हामीले देखेका छौँ । केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक नै राजधानीको सबैभन्दा महँगो रिसोर्टमा डाकिएको थियो, पछि विभिन्न कारणले सारियो । अख्तियारदेखि न्यायालयसम्म निलिसकेका बिचौलिया र सबैभन्दा ठूला कर्पोरेट दलालहरू नै नेताहरूका ‘मध्यस्थ’ भइरहेसम्म ‘दलाल पुँजीविरुद्धको लडाइँ’को नारा केवल हाँसोको विषय हुन्छ । के पार्टीसँगै नेता पनि अब ‘नयाँ’ होलान् ? प्रश्नले बनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनले के अब जवाफ पनि दिन सक्ला ?